Soo dejisan Ultimate Boot CD 5.3.8 – Vessoft
WindowsNidaamkaTijaabada iyo Tijaabooyinka,Soo celinta iyo soo celintaUltimate Boot CD
Qaybaha: Tijaabada iyo Tijaabooyinka, Soo celinta iyo soo celinta
Bogga rasmiga ah: Ultimate Boot CD
Ultimate Boot CD – waa noocyada codsiyada iyo adeegyadda ogaanshaha si loo hagaajiyo dhibaatooyinka kombiyuutarka. Baakadkan codsiga waxaa lagu keydiyaa hal faylka ISO iyadoo la adeegsanayo kaas oo aad u baahan tahay inaad abuurto CD ama boorsada fareebka ah. Ka dib markaad kumbuyuutarka bilowdo adiga oo isticmaalaya warbaahin bootable ah, waxay u muuqataa inay ku qoran tahay macnaha ereyga "Ultimate Boot CD" oo la mid ah BIOS, halkaas oo aad dooran karto korantada lagama maarmaanka ah si loo xaliyo dhibaatada gaarka ah. Qalabka barnaamijka waxaa ka mid ah adeegyadda lagu shaqeynayo BIOS, imtixaanka CPU iyo RAM, soo celiyo xogta, dhejinta dukumintiyada, dib u soo celinta iyo dib u soo celinta nuqulada adag, soo bandhigaan macluumaadka ku saabsan dhuumaha, dib u habeyn iyo qaabka naqshadaha adag, iwm. Ultimate Boot CD waa qalab wax ku ool ah oo u adeegsan kara xaaladaha kala duwan haddii ay dhacdo dhibaatooyinka kombiyuutarka.
Qalabka korontada si ay ula shaqeeyaan BIOS
Qalabka tijaabada CPU
Barnaamijyada si ay ula shaqeeyaan dhago adag
Utiliyadaha si loo tijaabiyo RAM
Qalabka dayactirka iyo dib u soo kabashada
Soo dejisan Ultimate Boot CD
Faallo ku saabsan Ultimate Boot CD
Ultimate Boot CD Xirfadaha la xiriira
FurMark – softiweer wuxuu tijaabiyaa awooda kaararka fiidiyowga. Softiweerku wuxuu ka kooban yahay utility gudaha kujira si loogu soo bandhigo macluumaad faahfaahsan oo kusaabsan xuduudaha kaararka fiidiyowga.
Qalabka loo yaqaan ’Desktop Sidebar’ – oo ah tiro qalab-dheereyaal ah oo faa iido leh iyo xog-ogaal u ah desktop-ka. Qalabka waxaa ka mid ah jadwalka, jadwalka, wacyigalinta waxqabadka nidaamka iyo inbadan.
Software in ay tayadoodii iyo waxqabadka ka qabi karto ka mid ah nidaamka. Software ka kooban yahay tiro balaadhan oo ah qalab si astaysto nidaamka iyo beddelo goobaha ammaanka ah.
Software-ka waxaa loogu talagalay inuu furo feylka qashinka adoo ka saaraya faylasha qalabka rakibay (.msi) iyo feylasha kabadan (.msp) nidaamka.
Software waxay abuurtaa a soo duubey xirfadeed oo tayo-sare leh. Sidoo kale waxa ay taageertaa qaabab warbaahinta badan iyo saamaynta garaafyada ama dhawaaq oo kala duwan.
AVZ – tamar fayras ah oo lagu takhaluso spyware iyo adware. Software-ka ayaa awood u leh inuu ogaado noocyada kala duwan ee trojans, Gooryaanka iyo dibedda.